ओहो ! दौंतरीले अचम्मै गरेछ ।
मनोवाद र मनोलाप दुवै उत्कृष्ट छन् । तर सुजाता बाहेक अरू कांग्रेसी मन्त्रीको नामावाली छ्या भन्ने खालको लागेन ।
पुष्पलाइ के अचम्म लाग्यो त्यस्तो?
एकलब्य जि धन्यवाद!यो कमरेडको मनोबाद र एउटा जीर्णकाय धृतराष्ट्रको मनोलाप दुबै उत्कृठ लागे मलाई त ।
कामरेडको मनोवाद जस्तै यी जीर्णकाय धृतराष्ट्रको मनोलाप पनि चित्त बुझ्ने छ ।
यहाँ दूर्योधन पुरुषको सट्टा महिला भएको मात्रै हो, बाँकि कुरामा यीनको यो छोरीको रुपमा सत्तारोहण गर्ने मोह अन्धा धृतराष्ट्रको सोच भन्दा अझै घृणीत छ ।